भताभुुंग सडक... - Goraksha Online
तुलसीपुर, २९ भदौं । निर्माण सुरु भएका सडकहरु भताभुंग छन् । किचकिचे हिलोदेखि ठुला ठुला खाडल सडकमा परेका छन् । राजमार्ग होस वा सहायक राजमार्ग पानी पर्दा हिलामे घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेका छन् । सडक सुधारका लागि न त सम्बन्धित निकायको चासो छ । ठूला ठूला गाडीहरु त्यहीँ बाटो हुइकिन्छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पनि हातल त्यही छ भने लमही–घोराही सडक होस् वा सल्यान–रुकुम सडकखण्डको कालोपत्रे सडकैभरि खाडल पर्दा यातायातका साधन सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ । ‘कठै हाम्रो सरकार कसैलाई कुर्सी नपाएर लडाइँ छ कसैलाई कुर्सी टिकाउन र मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा लडाइँ छ । यो भत्किएको सडकमा कसको नजर ? एकजना मोटसाइकल चालक हरि केसीले भने । उनले ३ घण्टा लाग्ने बाटो बिग्रँदा आफूलाई ७ घण्टा यात्राका लागि समय लागेको सुनाए । सवारी कर तिर्न रुकुमबाट दाङ आएका केसीले आफूहरुले तिरेको कर कसका लागि र कसका लागि भन्दै दुखेसो पोखे ।
त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गर्दै आएका चालक आकाश वली क्षेत्रीले पनि एक दिन गाडी चलाए अर्को दिन ग्यारेज गाडी थन्काउनुपर्ने समस्या भएको बताए । उनले पनि यो देशमा सरकार भए–नभएको आभास भएको गुनासो गरे । ‘एक ट्रिप यात्रा गरे कहिले गाडीको बडी ठोकिन्छ कहिले पट्टा कोभिडले थला पारेको यातायात बाटोले गर्दा अर्को पीडामा छ’, उनले भने । उनीजस्तै धेरै चालक र यात्रुहरुले समयमै सडक मर्मत नहुँदा यात्रामा सास्ती खेप्नुपरेको छ । साँझ काठमाडौबाट छुटेका गाडीहरु बेलुका आउनुपर्ने समस्या छ ।
सम्बन्धित निकायले सडक मर्मत सम्भारमा चासो नदेखाउँदा तथा समयमै सडक मर्मत नहुँदा कालोपत्रे सडकहरु जीर्ण भएको नागरिकहरु बताउँछन् । त्योसँगै दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै भएको चालकहरु बताउँछन् । ‘पहिले केन्द्र र प्रदेशमा दुई तिहाइको सरकार थियो, समृद्धिका नारा पनि धेरै थिए कहिँ कतै समृद्धि आएर अहिले कुुर्सीका लागि सरकार बाहिरकाको जुहारी छ भताभुंग सडक तिर ध्यान कसैको छैन’ एक चालकले भने ।
सीमित यातायात साधनका लागि बनाएका कालोपत्रे सडकहरुमा हाल ओभेर लोड र यातायातका साधनहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढेका कारण पनि सडकको दुर्दशा भएको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । सडक बिग्रिएको स्थानमा समयमै निर्माण नुहुनु र कालोपत्रे सडकको क्षमताभन्दा बढी ओभेरलोड भएका कारण सडकहरु छिट्टै बिग्रिने इन्जिनिर विक्रमबाबु केसीले बताउँछन् । ‘समयमै बिग्रेको स्थानमा मर्मत हुँदैन सडकको क्षमताभन्दा बढी लोड बोकेर सवारी दैनिक गुड्छन् अनि कहाँबाट सडक राम्रो हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
बर्षातका कारणले पनि विभिन्न स्थानमा सडक बिग्रन गरेको छ । त्यस्तै स्तरोन्नतिका नाममा बर्सौँसम्म भएका सडकहरु पनि मर्मत नहुँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ । समयमै सडक निर्माणको काम नसक्ने र कालोपत्रे सडकहरु पनि विभिन्न स्थानमा मर्मतका लागि बिगारेकाले यात्रुहरुले समस्या व्यहोर्नुपरेको सर्वसाधारणहरु बताउँछन् । ‘यो देशमा नियम कानुन छ कि छैन ? कसले के गर्नुपर्ने हो त्यो पनि दायित्वबोध छैन त्यसको मारमा जनता छन’, स्थानीय दीर्घनाराण भुसालले भने– ‘यसको विषयमा कुनै पनि पक्षले आवाज उठाएको छैन ।’